Nabadoon Caan aha Oo Lagu Dilay Magaalada Beledweyne, – Heemaal News Network
Kooxo hubeysan ayaa xalay toogasho ku dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Cismaan Yuusuf Ciiley xaafadda Howl-wadaag ee magaalada Beledweyne.
Rag ku hubeysnaa bastoolado ayaa la sheegay in nabadoon weerar ku qaadeen iyaga oo toogashada kaddib-na goobta ka baxsaday.
Waxaa soconaya howlgalo ay wadaan ciidamada dowladda oo lagu baadi-gaoobayo kooxaha dilka ka danbeeyay, waxaana arintan siweyn uga xumaaday shacabka magaalada oo ka dalbaday laamaha amniga in ay qaadaan tallaabo ka dhan ah dilka nabadoona.
Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay dilka nabadoon, hasse ahaatee falal hore oo sidan oo kale loogu dilay qaar ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa sheegtay Al-shabaab.
Masuuliyiin Ka Tisrsan Maamulka Gobolka Hiiraan Oo Xilkii Laga Qaaday
War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Wasiirka Arrimaha Gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiye ku xigeenkii Arrimaha Bulshadda Gobolka Hiiraan Sheekh Cusmaan Xuseen Cali iyo Xoghayihii […]
Shabaab Oo Gubay Toban Iyo Hal Gaadhi Oo U Rarnaa Degmada Xudur Ganacsatii Wadatayna Dilay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Maleeshiyaad ka tirsan al-Shabaab ay toogasho ku dileen Lix ruux oo ganacsato ah. Maleeshiyada ayaa dilka kadib gubay 11 gaadiid xamuul ah […]
Dil Lagu Xukumay Askari Toogasho ku Dilay Darawal Mooto Bajaaj.
Maxkamada ciidamada qalabka sida ay dil toogasho ku riday Maxamed Xusseen Siidoow oo ka tirsanaa ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo horaantii bishan toogasho ku dilay gudaha magaalada Beledweyne marxuum Yaasiin Cali Saney oo ahaa darawal Mooto […]